I-Immunotherapy - Sorrento Therapeutics
Ubuchwepheshe be-G-MAB bobunikazi be-Sorrento, obusungulwe uDkt. Ji, busekelwe ekusetshenzisweni kokulotshwa kwe-RNA ukuze kukhuliswe izizinda eziguquguqukayo ze-antibody kusuka kubanikeli abangaphezu kuka-600.
Ukuhlaziywa okujulile kwedatha ye-DNA yokulandelana okujulile kubonise ukuthi umtapo wezincwadi we-G-MAB uqukethe ngaphezu kwama-quadrillion ayi-10 (1016) ukulandelana kwe-antibody okuhlukile. Lokhu kuyenza ibe ngomunye wemitapo yolwazi emikhulu evikela abantu ngokuphelele embonini ye-biopharmaceutical. Kuze kube manje, i-Sorrento isikhombe ngempumelelo amasosha omzimba womuntu ngokuphelele ngokumelene nezinhloso ze-oncogenic ezinethonya eliphezulu ezingaphezu kwe-100, okuhlanganisa i-PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, VEGFR2, ne-CCR2.
Izinga lokushaya lokuhlolwa eliphumelele kakhulu (okuhlosiwe okuhlosiwe okubalulekile okungu-100+ kuyahlolwa).
Ukuhlukahluka okuphezulu kakhulu (2 x 1016 ama-antibody ahlukene ngokulandelana)
Ubuchwepheshe bobunikazi (i-RNA amplification yokukhiqiza umtapo wezincwadi)
Ukusekelwa okugcwele kokuhlaziya
IMOTO T / DAR T